Maalinta: Abriil 8, 2020
Kovid - 19 faafitaan ayaa wali ku sii faafaya dalkeena iyo adduunka oo dhan. Maalin kasta dalkeena, sida adduunka oo kale, maalin walba si looga hortago faafitaanka, halka dhaawacyada ay sabab u yihiin noocyada cusub ee coronavirus ay kordhaan, [More ...]
Wasaaradda Caafimaadka ayaa soo saartay Mashruuca Korjoogteynta Faafa ee Faafida (ITP) si loo naaquso dillaaca Kovid-19 isla markaana loo karantiilo bukaannada. Sida lagu sheegay bayaanka uu soo saaray Madaxtooyada ee Isgaarsiinta, karantiil waa in la xakameeyo nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19). [More ...]
Agaasinka Guud ee EGO, oo xiriir la leh Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara, ayaa leh 254 xubnood oo ka tirsan CNG taas oo ka dhalatay wadaxaajood lala yeeshay Bangiga Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta (EBRD) si loo buuxiyo baahiyaha gaadiidka ee dadka magaalada iyo ballaarinta shabakadda gaadiidka dadweynaha ee Ankara. [More ...]
Marka la eego baaxadda dagaalka lagula jiro cudurka Coronavirus (Covid-19) faafa, 7 muwaadiniin Turki ah, kuwaas oo ka yimid Qatar 2020-dii Abriil, 360, codsi ka yimid Xafiiska Guddoomiyaha Ankara, ee loogu tagayo gobolka gooni u goosadka ah ee Degmooyinka Magaalada Ankara ee EGO General Basket Directorate. [More ...]
Maamulka Dekadda 'TCDD Izmir Port,' oo qaaday talaabooyinka la codsaday sababo la xiriira nooca cusub ee coronavirus (Covit-19) ee saameeyay adduunka sida ugu dhaqsaha badan uguna muujiyey shaqo tusaale ah, Ururka kerszmir Customer Brokers Association. [More ...]
Shirkii jaraa'id ee fiidnimadii Talaadada, Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca wuxuu sheegay in wasaarad ahaan, codsi moobil ah oo loo yaqaan 'Hayat Eve Sığar' in la sameeyay si loo ogaado oo loola socdo kiisaska 'Covid-19'. Wasiir Koca, [More ...]
Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinku waxay sii wadaysaa bixinta taageerada milkiilayaasha guryaha cusub iyo kiraystayaasha! Kireystayaasha waxaa la siiyaa kaalmo kiro ah sababa la xiriira isbadal xagga magaalada ah oo ay ku kala duwanyihiin lacagaha lagu bixiyo kaalmo kala duwan oo laga helo magaalo ilaa magaalo. Caawinaadani waa magaalooyinka waaweyn [More ...]
Wasiirka Maaliyadda iyo Maaliyadda Berat Albayrak ayaa bayaan uu soo dhigay akoonkiisa warbaahinta bulshada ku saabsan talaabooyinka laga qaaday cudurka faafa ee coronavirus. Iyada oo la adeegsanaayo tibaaxaha "Muhiimadeena koowaad waa in mid ka mid ah muwaadiniinteenu aysan shaqadooda lumin", Albayrak wuxuu cadeeyay inay ka taxadaraan. this [More ...]
Waqti ka waqti ... Waxaan aqrinay in heerka xaqiijinta mashruuca tareenka ee qadka Bursa-Yenişehir uu gaaray 70 boqolkiiba. Jadwalka soo socda wuxuu daaha ka qaadayaa macluumaad kala duwan: Saldhigga Bursa oo ah goobta ugu hooseeya weli wax mashruuc ah weli ma uusan jirin. Deegaanka, kaas oo ah bartilmaameedka koowaad ee goorta laga baxo meesha laga baxo [More ...]
Bilowga mashruuca… Saldhigga Bari waxaa laga dhisay xadka Gürsu ee wadada 'Ring Road' si loogu raro dadka ku nool bariga magaalada. Idaacadan ayaa gashay ajendaha iyadoo lagu adkeysanaayo Orhan Özcü, oo ahaa duqa magaalada Gürsu waqtigaas. Si kastaba ha noqotee ... Meesha loo tixgaliyo inay tahay guryo cagaaran iyo dhul beereed, iyo wadada laga dhisayo Gürsu waa beeraha. [More ...]
The Sayniska iyo Golaha tignoolojiga Research of Turkey (TUBITAK), Difaaca Research Institute iyo Horumarinta (SAGE) ku dhawaaqay in ay noqon doonto 34 shaqaalaha in la shaqeeya. Sida ku xusan ogeysiiska machadka lagu daabacay Jariidada rasmiga ah, T ,BİTAK SAGE [More ...]
Degmada Elazig waxay sii wadaysaa howlaheeda kale ee wadooyinka kuwaas oo ku neefsanaya taraafikada magaalada oo leh wadooyin cusub iyo jid gooyooyin. Bixinta gadiid aan kala go 'lahayn oo raaxo leh magaalada oo dhan iyadoo kooxo kuxiran Agaasinka Arimaha Sayniska Degmada Elazig [More ...]
Iyadoo la qaadayo talaabooyin lagu yareynayo saameynta iyo faafinta heerka Cudurka Faafa ee 'New Type Coronavirus', kaasoo ku faafaya adduunka oo dhan, Degmada Alanya waxay adeegsaneysay tuneel ka-hortaga cudurka u gaarka ah badbaadada muwaadiniinta. Alanya [More ...]
Mersin degmada Metropolitan, Turkey coronavirus dillaacay ee macnaha guud ee la dagaalanka kordha, saamaynta ay labo dhibcood kala duwan ee magaalada ayaa bilaabay codsi cusub muddo 5 maalmood ah, la istaago at hab nuurka cas [More ...]
Helitaanka Bilaashka ah ee Farmashiistayaasha iyo Shaqaalaha Farmashiyaha ee Diyarbakır
Shaqaalaha caafimaadka kadib, farmashiistayaasha iyo shaqaalaha farmasiiga ayaa waliba ka faaiidaysan doona gaadiidka dadweynaha taasoo qayb ka ah dadaallada lagula dagaallamayo coronavirus iyadoo la raacayo tilmaamaha Guddoomiyaha Diyarbakır iyo Duqa Magaalada V. Hasan Basri Güzeloğlu. Mudane Gacaliye [More ...]
TransportationPark waxay isla markiiba hubisaa gaari walba shaqaalaha xarunta kontaroolada. Rakaabku waxay awoodaan inay ku safraan jawi caafimaad qaba iyagoo qaadanaya duulimaadyo dheeri ah marka loo eego cufnaanta ay ku arki karaan baabuurta, iyagoo leh caafimaadka marka hore. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay u qoondeeysay adeegyo khaas ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka marka ay codsadaan rugta daawada ee Izmir. Xarunta ESHOT waxay u qorsheysay seddex khad oo cusub oo kaliya xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, leh coronavirus [More ...]
Marka la eego baaxadda waajibaadka adeegga dadweynaha, 7 xarriiq oo xawaare sare leh (YHT), iyo 18 xarumood oo waaweyn iyo 36 xarumood oo gobolka ah ayaa la siin doonaa adeegyada gaadiidka rakaabka. Go'aanka Madaxweynaha ee ku saabsan arrinta waxaa lagu soo saaray Gazette Rasmi ah oo dhaqan galay [More ...]
Cudurka 'coronavirus', oo dhulka u rogay xabsi hawleed furan, wuxuu saameeyay nidaamyada gaadiidka dadweynaha ee dowladda hoose iyo sidoo kale nolosha aadanaha. Shalay, waxaan ugu yeernay Mehmet Kürşat Çapar, Maareeyaha Guud ee BURULAŞ, oo ah shirkad hoosaadka degmada Bursa Metropolitan. Waxaan taabannay Aarar oo waxaan maqalnay kun ah ah ah. [More ...]
Adeegyada tareenka dhulka hoostiisa ee Istanbul ayaa dhammaaday 21.00:00.00. Booqashooyin la sameeyay illaa 06.00 illaa iyo hadda waxaa la qaban doonaa inta u dhaxaysa 21.00-2 iyada oo go'aanka laga gaadhayo baaxadda tallaabooyinka fayraska corona. The metro oo qaada in kabadan XNUMX milyan oo rakaab ah maalin walba magaalada Istanbul [More ...]
Degmada Batman waxay adeeg siisaa muwaadiniinta iyo darawalada wata codsiyada '' Iftiin iyo Nalal aan Jirin ', kuwaas oo lagu rakibay meelaha ugu mashquulka badan si loo yareeyo socodka gaadiidka magaalada. Waxaa qoray Agaasinka Adeegyada Gaadiidka Dawlada Hoose ee Batman [More ...]
Wasiir Selçuk: “2. Caawimada bulsheed ee Faz waxaa la siin doonaa 2 milyan 300 kun oo qoys oo kaladuwan. ”Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Sel Presidentuk, ayaa maanta shacabka kunool Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. [More ...]
Khadad cusub oo 'Metrobus Stop', Dhamaan Jagooyinka Mitirooyinka iyo Khariidadaha 'Metrobus Stop': Waxaad ku arki kartaa dhammaan istaagida mitrooga isku hal khariidad, kaas oo ah metrobus-ka ugu dhow meesha aad rabto inaad tagto iyo halkaad tagi doonto [More ...]
dunida oo dhan sarkhaansan duurka yahay, halka ugu xun dareemay in Istanbul, Turkey Covidien 19 Guddiga Science Disease by IMM IMM abuuray si ay ula dagaalamaan on martiqaad, ayaa ku dhawaaqay soo jeedinta. Wasaaradda Caafimaadka [More ...]
Macallimiinta ISMEK ayaa soo dhejiyay fiidiyowyo loogu talagalay kuwa raba inay masar u yeeshaan gurigooda. Fiidiyowga laga wadaago xisaabaadka warbaahinta bulshada ee IMB, faahfaahinta samaynta maaskaro ayaa si faahfaahsan loogu sharxay. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Coronavirus wuxuu saameeyaa adduunka oo dhan [More ...]
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer wuxuu booqday Agaasinka Guud ee ESHOT iyada oo loo eegayo baaxadda barnaamijka xafladaha. Maareeyaha Guud ee ESHOT Erhan Bey iyo Kaaliyaha Guud Maareeyayaasha Turgay [More ...]